Taiza no andriamanitra , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Fotoana fohy taorian'ny nanafihan'ny mpampihorohoro ny 11 septambra, dia ivon'ny mpamonjy voina i St. Paul ary toerana hifandraisana amin'ny havany nikaroka. Nandritra ny herinandro maro, mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony maro avy amin'ny finoana samihafa no tonga tamin'ity toerana ity, maniry mafy ny hiara-hiasa mba hiatrehana ny loza. Nitondra sakafo mafana ny mpianatr'i St. Paul ary nanampy tamin'ny fanadiovana. Nanome fampiononana ho an'ireo namoy namana sy fianakaviana izy ireo.
Ny fiangonana kely izay natao teo dia hanohy mampahatsiahy antsika fa na dia amin'ny fotoana tena ilana azy aza, dia tena akaiky Andriamanitra - ao aminy no misy fanantenana amin'ny alàlan'i Kristy Tompontsika. Ny fiangonany manerana izao tontolo izao dia fijoroana ho vavolombelona momba izany ary fampahatsiahivana antsika fa tsy navelany hisy zavatra hitranga eto amin'ity fiainana ity izay avahana amin'ny famonjeny tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Mankalaza ireo olona namoy ny ainy izahay ny 11 septambra. Mivavaka aho mba hahatsapa isika rehetra fa efa lasa ny Tompontsika ary mbola hiaraka amin'izy ireo lalandava, anisan'izany isika.